FBS ဘောလုံးပွဲ ခရီးစဉ်အတွက် အဆင်သင့်ပြင်ထားလိုက်ပါ!
မိတ်ဆွေတို့အတွက် စပါယ်ရှယ်တစ်ခုကို စီစဉ်ပေးထားပါတယ်နော် - ရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ ဘောလုံးပွဲကြီးတွေကို ကံထူးရှင် ၅၅ဦးက သွားရောက်အားပေးခွင့်ရမှာပါ (ဟုတ်ပါတယ် ၄နှစ်မှာတစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့ ပွဲပါ). စိတ်ဝင်စားသွားပြီလား? အသေးစိတ်သိဖို့ နှိပ်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်! ကဲ စိတ်ကူးထဲမြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါဦး... အားပေးနေတဲ့ အားရ၀မ်းသာအသံတွေ ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတဲ့ အပျော်မျက်နှာတွေနဲ့ ကွင်းထဲမှာ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေရယ်၊ မိတ်ဆွေတို့ရယ်! မိတ်ဆွေတို့က FBSရဲ့ အကောင်းဆုံးထရိတ်ဒါတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံးဘောလုံးပွဲကြီးကို အတူတူအားပေးခွင့်ရမှာနော်! မြန်မြန်လေးနော်. ဒီလိုအားပေးခွင့်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရအောင်လုပ်ရမှာနော်. အခွင့်အရေးပိုများအောင် ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပွဲစဉ်အားလုံးမှာလဲ ၀င်ပြိုင်ခွင့်ရှိနေတယ်နော်.